A na-akpọkwa ihe ngosi mbata na mbupụ nke China dị ka Canton fair.Founded n'oge opupu ihe ubi nke 1957 ma na-eme ya na guangzhou n'oge opupu ihe ubi na ụbịa nke afọ ọ bụla, ọ bụ mmemme azụmahịa zuru ụwa ọnụ na akụkọ ntolite kachasị ogologo, ọkwa kachasị elu, nke kachasị ukwuu. ọnụ ọgụgụ, ụdị ngwa ahịa kachasị zuru oke, ọnụ ọgụgụ kachasị ukwuu nke ndị sonyere na nsonaazụ azụmahịa kacha mma na China.
Tianjin TheOne Metal Products Co., ltd bịara mmadụ 115n Canton Fair na 2013 maka oge mbụ. Ndị otu niile gara ebe a na-eme ihe ngosi.
Site na mgbe ahụ gaa n’ihu, anyị na-aga Canton Fair ugboro abụọ n’afọ ma nweta ọtụtụ ndị ahịa ọbụlagodi ọtụtụ iwu.
Mana na mbido afọ 2020, n'ihi ntiwapụ nke nje virus nke Corona, mba ahụ nile enweghị mkpọchi. Na mbido March, nje na-efe efe na mba ofesi. Dịka anyị siri mara, Canton Fair bụ onye enyemaka n’April, mgbe anyị na-eche ma aga-eme ihe ngosi n’afọ a, Ministri Azụmaahịa N’etiti ndị China na-agwa na a ga-enwe ngosi ọka mbịambịa 127 nke China na mbupụ (Canton fair). ntanetị maka ụbọchị 10 site na 15-24n June.Holding the Canton fair online bụ ihe dị mma iji rụsie ọrụ ike iji merie nsonaazụ ọnyache 19 na idozi azụmaahịa nke azụmaahịa mba ofesi na ntinye ego, nke na-enyere aka ịbanye n'ụlọ ọrụ azụmahịa nke mba ọzọ ịnweta iwu ma chekwaa ahịa ahụ, ma kpọọ. ọrụ dị mma karịa ka ọ bụrụ ikpo okwu maka imeghe ụzọ maka mpụga ụwa. Ozi nke azụmahịa ga-agbaso mkpa nke mbubata na mbupụ, rụọ ọrụ dị mma na njikọ nke mmepụta, ọkọnọ na ịzụ ahịa, jisie ike n'ịhazi ọrụ. ike niile, meziwanye ọkwa ọrụaka, ịkwado ọrụ, ịntanetị ahụmịhe nke nnukwu ụlọ ọrụ na ndị ahịa, ma na-agba mbọ ijide "oge pụrụ iche, ihe pụrụ iche, ihe pụrụ iche, ọkachasị mma" ntanetị Canton fair.Welcome ụlọ na mba ofesi. ndị ahịa na-esonye.
N'ụbọchị ndị a, anyị na-akwado nkwado maka Canton Fair n'ịntanetị na akụkụ niile. Site na ikpo okwu ziri ezi nke Canton dị n'ịntanetị, mee ka ndị na-azụta ụlọ na mba ọzọ zute anyị, mara anyị, ma nweta nkwado mmeri site na anyị.
Oge a ka Canton Fair Booth Nke bu 16.3I32. Nabata na ị gaa n'ụlọ ntu anyị n'ịntanetị.
Oge nzipu ozi: Jun-12-2020